Nangidy lela amin’ny tsy fahasahian’ny governemanta manakana ireo mpitsidika avy any tanibe ny mpiasan’ny fitsaboana ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Ny hakitroky ny mponin'i Hong Kong no mamparefo azy amin'ny valan'aretina
Voadika ny 13 Febroary 2020 4:51 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny 30 janoary 2020)
Sendikàn'ny mpiasan'ny fahasalamana niforona vao haingana mandrisika ny governemantan'i Hong Kong hanidy ny tanàna tsy hidiran'ny vahiny shinoa tanibe. Saripika avy amin'ny Stand News. Nahazoana alalana.
Efa hatramin'ny 23 janoary ny matihanina ara-pitsaboana ao Hong Kong no nandrisika ny governemanta hanakatona ireo toeram-pisavana amin'ny sisintanin'i Hong Kong-Shina mba hamerana ny fielezan'ny coronavirus-n'i Wuhan – izay antsoina amin'ny fomba ofisialy hoe Covid19 – tsy hiditra any Hong Kong. Ny hany neken'ny governemanta, anefa, dia ny hanamafy ny fisavana sy ny hampihena hatramin'ny atsasany ireo mpandeha avy any amin'ny Tanibe.
Tamin'ny 30 Janoary, miisa 7830 ny voamarina ary 12.167 no ahiana ho tratran'ny coronavirus ao Shina. Izany tarehimarika izany dia efa mihoatra ny tranga voamarina miisa 5.327 voarakitra nandritra ny fielezan'ny valan'aretina Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS na Sahirana dia sahirana Ara-Pisefoana) tamin'ny taona 2003. Ao Hong Kong, ireo 10 voamarina fa tratran'ny coronavirus dia na mpitsidika avy any Wuhan na Hongkongers vao nitsidika io tanàna io.
Na dia efa nanidy ny tanànan'i Wuhan, renivohitry ny faritanin'i Hubei sady foiben'ilay valan'aretina, aza i Beijing tamin'ny 23 janoary, araka ny nolazain'ireo manampahefana ambony avy ao Hubei, manodidina ny 5 tapitrisa teo ho eo ny mponin'i Wuhan (mihoatra ny 40 isanjaton'ny mponina ao an-tanàna) no nandao ny tanàna nandritra ny firohotana mandeha isa-taombaovao. Mametraka izany fa olona mitondra ny coronavirus an'arivony maro no nifindra manerana ny firenena.
Hatramin'izay fotoana izay, samy niteny i Beijing sy i Shanghai fa efa mihoatra ny 100 (zato) ny tranga voamarina ary efa nahitana tranga voamarina miisa 354 ny ao Guangdong, faritany iray mifanila amin'i Hong Kong. Manahy ny sehatry ny fitsaboana fa raha tsy manakatona ny sisintaniny amin'ny mpandeha avy any tanibe i Hong Kong, dia mety hiely ao an-tanàna, izay marefo dia marefo amin'ny fielezan'aretina io tanàna io noho ny hakitroky ny mponina.
Na dia nampihena hatramin'ny 50% amin'ny vahiny mpitsidika avy any an-tanibe aza ny fitarazohan'ny hetsi-panoherana anti-governemanta ao Hong Kong, dia mbola nandray mpitsidika avy ao Shina tanibe miisa 1.927.649 ihany ny tanàna tamin'ny Novambra 2019 fotsiny. Midika izany fa raha atao salanisa dia mihoatra ny 30.000 isan'andro ny Shinoan'i Tanibe miditra ao an-tanàna. Koa satria maro dia maro ny mponin'i Hong Kong no niverina tany ambanivohiny any Shina tanibe hankalaza ny taombaovao manara-bolana, ary hitodi-doha any Hong Kong any amin'ny fiafaran'ny fety amin'ny 28 Janoary ka hatramin'ny fiandohan'ny volana Febroary, dia manahy ny sehatry ny fitsaboana ao Hong Kong fa mety ho hipoka olona ny hopitaly rehefa tsy mametra ny fidiran'ny shinoan'i tanibe ny governemanta.
Lesona mangirifiry avy amin'ny valan'aretina SARS
Mitombina ny fanahian'ny sehatra ara-pitsaboana. Hong Kong no faritra niaritra ny mangidy indrindra tamin'ny valan'aretina SARS 17 taona lasa izay. Nahafaty olona miisa 286 ilay valan'aretina tanelanelan'ny volana marsa ka hatramin'ny jona 2003 tao Hong Kong, ary mpiasan'ny fitsaboana ny sivy tamin'ireo. Tena niely haingana dia haingana avy tao Guangzhou, izay nametraka ny 80 isanjaton'ny tranga tao Hong Kong, tafiditra amin'izany ny infirmiera sy dokotera 30 tao amin'ny hopitaly nitsaboana ireo tratran'ny valan'aretina, io aretina io.
Vokatr'izany dia ranga avy hatrany ny tanàna raha vao vaky ny vaovaon'ny Covid19. Tanelanelan'ny 5-15 Janoary, tamin'ny fotoana nanambaràn'i Shina fa tsy nisy ny fitomboan'isan'ny tratran'ny valan'aretina, nahamarika tranga mampiahiahy miisa 76 i Hong Kong. tamin'ny 21 janoary, raha nitsipaka ny mety hisian'ny fifindrana eo amin'ny samy olombelona i Shina, nanambara i Yuen Kwok Yung, manampahaizana indrindra ao Hong Kong amin'ny resaka areti-mifindra fa efa nisitra tamin'ny dingan'ny fifindrana ilay viriosy. Talohan'ny nanokanan'i Beijing monina an'i Wuhan tamin'ny 23 janoary, maro amin'ireo Shinoa mpiseraseran'i tanibe no miampanga an'i Hong Kong ho mampiely zava-manakorontana ny fiarahamonina.
Mpiasan'ny fitsaboana maro no mandrisika ny governemanta hanidy ny sisintany Hong Kong-Shina
Raha nandray lesina avy amin'ny fangirifiriana vokatry ny fielezan'ny SARS ny sehatra ara-pitsaboan'i Hong Kong ka nangataka ny fanampian'ny mponina amin'ny fiadiana an'ity valan'aretina ity, dia mbola niraikiraiky ihany ny governemanta.
Ho valin'ny fangatahana hanakatonana ny toeram-pisavana rehetra amin'ny sisintany ifanoloran'i Shina sy i Hong Kong, dia ny fitaterana mivantana ifanaovan'i Wuhan sy Hong Kong ihany no neken'ny manampahefana. Nandrahona ny hanao hetsika tambabe ny Firaisankinan'ny Manampahefana sy Mpiasan'ny Hopitaly, sendikàn'ny mpiasan'ny fahasalamana niforona vao haingana ahitana mpikambana miisa 15.000, rehefa tsy manaiky ny hanakatona ny sisintany ny governemanta, nanazava fa:
Ny tanjon'ny fepetra tahaka izany dia ny mba isorohana ny tsy mponin'i Hong Kong hiditra ao Hong Kong avy any Shina raha tsy noho ny antony tsy azo lavina, ary raha heverina ho tsy azo ialàna ny fidirana ao Hong Kong, dia tokony hojerena tsirairay mihitsy ny tranga tsirairay hoe voaantoka ve ny fidiran'ity olona iray ity. Na ho an'ny olon'i Hong Kong miverina avy any Shina aza, tokony apetraka ny fepetra henjana hanaraha-maso ny fahasalamana
Noraràn'i Macau tsy hiditra tao an-tanànany ny mponina avy ao Wuhan sy ny faritanin'i Hubei nanomboka tamin'ny 26 janoary, ary nanara-dia azy i Hong Kong tamin'ny 27 Janoary. Nanambara ihany koa ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, Carrie Lam, fa haato ny tolotra an-dalamby haingam-pandeha mampifandray an'i Hong Kong amin'i Shina tanibe tamin'ny 30 Janoary, izay nahazo fankatoavana avy any Beijing, ary haaton'i Shina ny famoahana fanomezan-dalana ho an'ny mpitsidika tsirairay ho any Hong Kong avy amin'ny tanàna shinoa miisa 49. Ny politikan'izany dia ny hampihena hatramin'ny atsasany, izany hoe any ho any amin'ny 15000 isan'andro, ny isan'ny shinoan'i tanibe hitsidika an'i Hong Kong.
Mandritra izany fotoana izany, nambàran'i Rosia ny fanakatonana ny sisintaniny mba hisorohana ny fielezan'ny Covid19 ho ao amin'io firenena io. Nambaran'i Vietnam ihany koa ny fampiatoana fanomezana visas ho an'ny olompirenena shinoa rehetra, ary tafiditra amin'izany na dia ny avy ao Hong Kong sy Macau aza.
Koa satria moa efa hifarana ny vakansin'ny taombaovao manara-bolana, dia hannaa ny toerany manokana ny herinandro roa aorian'izany amin'ny fifehezana ny fielezan'ny valan'aretina. Mandritra izany fotoana izany anefa i Hong Kong mbola miandry ny fankatoavan'i Beijing amin'ny fanaraha-maso ny sisintany.